David Alaba Oo U Cadeeyay Chelsea Iyo Real Madrid Booska Uu Doonayo In Uu Ka Ciyaaro
Home Horyaalka Germalka David Alaba oo u cadeeyay Chelsea iyo Real Madrid booska uu doonayo...
David Alaba ayaa lagu soo waramayaa inuu u cadeeyay kooxaha xiiseynaya inuu doonayo inuu ka ciyaaro qadka dhexe.
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Austria ayaa beeca xorta ah kaga tagi doona Bayern Munich xagaagan, iyadoo kooxo dhowr ah oo ay ku jiraan Chelsea iyo Real Madrid si xoogan loola xiriirinayaa adeegiisa.
Alaba ayaa inta badan u shaqeeya sidii daafac bidix intii uu ku guda jiray xirfadiisa ciyaareed laakiin inta badan wuxuu u soo muuqday daafaca dhexe labadii xilli ciyaareed ee ugu dambeysay.
28 jirkaan ayaa sidoo kale awood u leh inuu ka ciyaaro khadka dhexe, sida uu sheegayo Le Parisien , Alaba ayaa qorsheynaya inuu ku biiro koox damacsan inay u isticmaasho qadka dhexe.
Warbixinta ayaa sheegeysa in xidiga reer Austrian-ka uusan meesha ka saari doonin inuu ka ciyaaro daafaca kooxda cusub oo uu ku biiro laakiin wuxuu mudnaanta siinayaa inuu ku biiro koox dooneysa inuu u ciyaaro khadka dhexe.
Manchester United iyo Paris Saint-Germain ayaa sidoo kale labaduba la sheegay inay ugaarsi ugu jiraan ninka sagaalka jeer ku guuleystay Bundesliga, kaasoo dhaliyay labo gool isla markaana diiwaan geliyay labo caawin 31 kulan oo uu u saftay Bayern xilli ciyaareedkan.
Previous articleLiverpool oo dayaarisay qiimaha ay ku dooneyso Xherdan Shaqiri’
Next articleBarcelona oo guul ka gaartay Kooxda Sevilla Xili Lionel Messi uu Shabaqa soo taabtay